I-RBS ethengisa kakhulu imvamisa ephezulu ye-30MHZ ukususwa kwemithambo yesicabucabu
Umbani wamaza amachashaza aphakeme kakhulu ukhiqiza i-30Hz ultra high frequency electromagnetic oscillation, enosilika othambile oyingqayizivele (kunoboya obuncane bezinwele), ngo-1/1000 okwesibili kwephula i-hemoglobin, Izokhipha ukudluliselwa kwamandla ebusweni besikhumba ukulandela ukususwa kwezilonda, ama-capillaries, kanye ne-intravascular hemoglobin break kuyenza ibe ngama-molecule amancane amuncwa izicubu zesikhumba uqobo.
I-Cryolipolysis body slimming Fat Freezing Machine enomsebenzi wezandla ezine ngasikhathi sinye
Faka isibambo endaweni ekhonjiwe, qala ukupholisa i-cryo ukuze ufinyelele izinga lokushisa eliqondisiwe.Amangqamuzana anamafutha endaweni eqondiwe aqala ukuphendula ku-cryo-crystallization.Landela ukwelashwa, amaseli anonile afinyelela ekufeni kwezinto eziphilayo futhi asuswe ngenqubo yemetabolism. .
Ama-Ems aqopha umzimba Imisipha eqinisa imishini yomzimba yomzimba
I-epinephrine ekhishwe ikhombisa amaseli anonile ukuqala i-lipolysis. Amafutha agcinwe ngesimo se-triglycerides abola abe ngama-fatty acids (FFAs) kanye ne-glycerol asetshenziswa njengemithombo yamandla.Izinciphiso ezinkulu ze-supramaximal zithuthukisa ukukhishwa kwe-epinephrine edala umphumela we-cascade oholela ku-liprysis ephezulu emangqamuzaneni anamafutha. Ukuphefumula futhi kukhulu, impendulo ye-lipolytic yeqise futhi ama-FFA aqala ukunqwabelana kuma-adipocyte.Ukuchichima kwe-FFA kubangela ukungasebenzi kweseli nokufakwa kwe-apoptosis-programmed death cell.
Umshini omusha kakhulu weLipozero rf vacunm Body Slimming
Ubuchwepheshe be-RF, obusetshenziswe ekwenziweni kwemitholampilo eNyakatho Melika iminyaka eyishumi nambili, buyindlela yezimonyo entsha ephephile, esebenzayo futhi engahlinzi futhi esebenza kahle yezokwelapha.
Umshini we-Velashape 3 Vacuum Roller Slimming Machine osetshenziselwa umzimba wonke nobuso
Ithiyori yokwelashwa yinqubo engeyona eyeyesabekayo esebenzisa i-vacuum cavitation suction ukuphakamisa i-epidermis, isikhumba kanye namafutha angaphansi, bese ihlanganisa futhi yelule izicubu ezihlangene ze-cortex ehlukile, engabola ngempumelelo amafutha angaphansi komzimba bese ikhama imithambo yegazi eyi-capillary, futhi kusheshiswe izicubu zomzimba izikhathi ezine. Amaseli amafutha nawo aba ngamafutha acid ngemuva kokuvivinya umzimba, futhi akhishwa emzimbeni empilweni yansuku zonke, ukuze kuzuzwe umphumela wokwehla kwesisindo
I-K350 9 In 1 Multifunction Beauty Machine Lipolaser Warhammer 40K Cavitation Vacuum Rf Slimming Beauty Machine
Ukuncishiswa kwamafutha e-Laser: I-650nm laser isetshenziselwa ukubhubhisa amangqamuzana ajulile amafutha futhi iguqule amanoni abe ama-triglycerides, akhishwe emzimbeni futhi athuthukise imetabolism.
Ukushisa kuvusa ukwanda kwe-collagen kanye nemicu e-elastic esikhumbeni, okwenza isikhumba endaweni yokwelashwa siqine futhi sinwebe.
I-K111 inaliti encane i-rf scar ukususwa kwe-RF yokushisa kwama-radiofrequency yokulungisa amamaki wokulula
Igolide microneedle radiofrequency njengamanje ingenye yezindlela eziphephe kakhulu futhi eziphumelela kakhulu zokususa izinduna nezibazi. Umgomo ngukuthi amagagasi omsakazo angena phakathi komkhawulo wama-melanocyte we-epidermal basal ukushisa imicu ye-collagen edermis iye kuma-55℃-65℃, kuqeda izindlala ezibusayo kanye namagatsha ezinduna, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe izimbobo zobuso, amabala enduna, uketshezi lobuso obunamandla, kanye nethoni yesikhumba. Okuphuzi okumnyama nezinye izinhloso.
I-2021 ephathekayo q-switch nd yag yedivayisi yobuhle be-laser yokususa i-tattoo kanye nokuhluba ikhabhoni
Ubuchwepheshe be-ND YAG Laser buthuthukise kakhulu ikhono lokwelapha izilonda ze-melanocytic kanye namathambo nge-pulsed Q-switch neodymium esheshiswe ngokushesha: yttrium aluminium garnet (Nd: YAG) laser.
nd yag laser carbon laser ikhasi elimnyama lokususa unodoli umshini we-tattoo
Umshini Ophezulu We-ND YAG Laser Removal Tattoo Machine onezintambo ezimbili
Umshini wePlasma bt Anti Aging Scar Treatment Smooth Wrinkle Machine
I-PLASMA BT ikhiqiza i-plasma ngocindezelo lwasemkhathini ngemvamisa ephezulu nengcindezi ephezulu, futhi isebenzisa ingcindezi yasemkhathini ukukhiqiza iplasma ecebile enobungani. Ingasetshenziswa ngempumelelo kumajwabu amehlo aphezulu, amajwabu amehlo aphansi, imibimbi, izibazi, isikhumba, ukuvuvukala, ukuphulukiswa kwamanxeba nokumunca izidakamizwa. Kunezindlela ezintathu: Umsebenzi we-PULSE, Umsebenzi oqhubekayo, nokungeniswa kokudla okunomsoco kwe-TDDS.
I-picosecond enamandla kunazo zonke engu-2000mj 755nm isusa i-endo native pigment tattoo
1. Amandla amakhulu we-Single pulse energy 2000mj, alula futhi aqediwe ukususa i-pigment engapheli esikhunjeni esijulile.
2. Uhlelo lwekhompyutha lungalawula amandla okukhipha ncamashi okuwukuzinza okwengeziwe, ngaphandle kwengozi.
3. Inomphumela omuhle ekusetshenzisweni okwengeziwe kufaka phakathi ama-pigment esikhunjeni nase-dermis, phakamisa isitayela sesikhumba njalonjalo.